အော်ပရာကိုငါချစ်တယ် Linux မှ
ဒီဘရောင်ဇာအကြောင်းပြောနေတာအတွက်ငါ့ကိုသတ်ပစ်မယ့် Linux နည်းနည်းလောက်သုံးမယ့်သူတွေရှိတယ်။ ငါဒါကိုသည်းခံမယ်၊ ဒါကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ xD အတွက်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါက browser ရဲ့ရှေ့မှာပိတ်ထားလို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုး ၇ နှင့်မူကွဲဖြစ်သော nokia x7 symbian အတွက်လည်းဖြစ်သည် အော်ပရာအသေးစား.
သင်တစ် ဦး အသုံးပြုသူဖြစ်တဲ့အခါ kdeထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါကြုံတွေ့ရသည့်ပြသနာများကိုသင်ထပ်ခါထပ်ခါကြုံတွေ့ရပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်သောနာမည်ကြီးဘရောင်ဇာများအားလုံးကိုတန်ဖိုးမထားသည့် interface ဖြင့်တီထွင်ထားသည်။ gtkကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိပါ rekonq, Konqueror, Qupzilla , သောသူတို့သည်စာကြည့်တိုက်အတွက် bug ကိုမှကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသော်လည်း ကွမ်းခြံကုန်းသူတို့သည်ဒုတိယအကြိမ်ဝက်ဘ်မှသင်ကြည့်ရှုသော flash ဖြင့်ပျက်သွားတတ်သည်။ YouTube တွင်ဗွီဒီယိုကြည့်နေခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်စရာတစ်ခုသည်သင်၏ browser ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
တေးသံစုံကဇါတ်, မည်သည့်အရာကိုမဆိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုဘဲ၊ desktop တိုင်း၊ operating system တစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စီမံနိုင်ခဲ့သည်၊ Opera unite၊ opera mail, bitorrent client၊ 64-bit, html5 အင်ဂျင်အသစ်၊ ragnarok လာမည့် ၁၂ လတွင်အော်ပရေတာဗားရှင်းအပြီးတွင်အပြည့်အ ၀ hardware အရှိန်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနောက်ဆုံးရောက်ရှိလာခြင်းကဲ့သို့သောထူးခြားသောအရည်အသွေးများ။
၎င်းသည်အခြားဘရောင်ဇာများထက်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်မျှသုံးစွဲနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏နှိမ့်ချသောအမြင်တွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်၊ တခါတရံတွင်၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များသိပ်များလွန်းခြင်းမရှိသော်လည်းအရင်းအမြစ်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ လျော့နည်းအသုံးပြုပေမယ့်ဖမ်းရရှိသောတ ဦး တည်းထက်အရည်။
ဟစ်စပန်းနစ်အော်ပရာအသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်တက်ကြွပြီး bug အစီရင်ခံစာများပေးပို့ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အမှန်တကယ်တွင် kwin ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သော flash နှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်အမှားအယွင်းများကိုတင်ပြရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ , ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါ့ ati များအတွက်စီစဉ်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » အော်ပရာကိုနှစ်သက်ပါတယ်
45 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အော်ပရာကမင်းကိုလှည့်စားတဲ့အခါသင်ငါ့ကို JAJAJAJAJAJAJAJAJA ကိုပြောပြပါ
ငါမျှော်လင့်ပါတယ်: $, ဒီအချစ်က XDDDD ပါ
မင်းရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလေးစားတယ်၊ ငါကတော့နင့်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ gtk interface နဲ့တီထွင်ထားတဲ့အပြည့်အဝကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးဘရောင်ဇာတွေ (မင်းရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ထင်မြင်ချက်အရ) ကိုငါကြိုက်တယ်။
ဤထင်မြင်ချက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အန္တရာယ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Flamewar အတွက်လမ်းကြောင်းနှင့်သီးသန့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အခင်းအကျင်းများဖန်တီးရန် browser များ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊
ဟားဟား!!! သင် LOL မည်သူမဆိုနှင့်အတူမသနားတျောမူပါ !!!!
ငါသည်သင်တို့ကို hehe သင်နှင့်အတူကယူနိုင်စေဖို့ ... တစ်ခုခုရေးသားဖို့ချင်ပါတယ်။
ဒါကသနားကြင်နာမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဒီခေါင်းစဉ်အမျိုးအစားအတွက် MetalByte ကိုကျွန်တော်ပိုဖတ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး၊ ငါကသူတို့ခေါင်းစဉ်တွေကိုမရှာဘူး၊ Muy Linux နဲ့မတူဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သူသည်မည်သူထုတ်ဝေသည်ကိုဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်၊
ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကိုမည်သူကမှဖတ်ရန်မတိုက်တွန်းပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ nick ကိုမြင်သောအခါသူတို့ကိုဖတ်။ မရပါ။
စာရေးသူနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။ ရိုးရှင်းသည့်စာဖတ်သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အရသာနှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုယူဆသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုရှာဖွေသည်။ တစ်ခုခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသွားလိမ့်မည်။
A ပန်ဒိုရာ သူဟာဆောင်းပါးတွေအတွက်မှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာကိုရှာရန်သင်ယူနေရဆဲဖြစ်သည်။ ဘယ်သူမှမသိဘဲမွေးဖွားလာကြပြီးသင်ကောင်းစွာသိကြသည်။
သင်သည်ထို site ၏အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘောလုံးများကိုမကြာခဏ hehe လုပ်လိုသော်လည်းသင် site ၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ... 😀
အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းပါးများကိုမကြိုက်ပါကကလေးမထားပါနှင့် ပန်ဒိုရာ သူတို့ကိုသူငယ်ချင်းများမဖတ်ပါနှင့်။ ဒီ Linux လောကမှကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေလိုသောကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရှိသောစာဖတ်ခြင်းများကိုရပ်တန့်သွားမည်လား။
Eduar2 ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုငါကြိုးစားအားထုတ်မှုပြုမယ်ဆိုရင်ငါနားလည်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စာရေးသူရော၊ ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှစ်ခုလုံးအတွက်ပါမတရားဘူး။
ငါဟာမင်းရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုနားလည်တယ်လို့ငါပြောတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကို (site) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမီးတောက်လောင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ ၀ င်တဲ့ဆောင်းပါးတွေပါ ၀ င်တဲ့ဒီ site ကိုနှိုင်းယှဉ်လို့ရတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ဤဆောင်းပါးသည်မှားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကောင်းသော site သည်အချိန်နှင့်အမျှ "ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါးများ" ကိုတတ်နိုင်ပြီးလုံးဝကျန်းမာနေစေသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့သည်သဘာဝထင်မြင်ချက်များဖြစ်သည့်တိုင် "စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောထင်မြင်ချက်များ" ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲချိတ်များသာမဟုတ်သောကြောင့် စာဖတ်သူများလက်နက်။
ကောင်းပါပြီ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်ကကျနော့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်ပါ။ PS: နှိုင်းယှဉ်လိုလျှင်၊ ရိုးရှင်းသောအရာကိုလုပ်ပါ။ google.com ကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်အဖြူရောင်ဘားတန်းတွင်အနက်ရောင်ဘားကိုမြင်ရလျှင်အော်ပရာနှင့် chrome vs firefox တို့ကိုရေးပါ။ ၂၁ ရာစု၏ကြီးမားသောနှိမ့်ချသောကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ၏ဤသေးငယ်သောသင်ခန်းစာသည်အနာဂတ်အတွက်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဖို့ဒီမှာလာတဲ့ linux bouncers တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
ကောင်းပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မသိသောဂူဂဲလ်တွင်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ပြီးတော့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကသူတို့ကငါ့ကိုအမြဲတမ်းအဲဒီလိုခေါ်ကြတာလေ။
ငါနှိုင်းယှဉ်အမုန်းဖြစ်ကြ၏အဆုံးသတ်ရလဒ်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်ကြပြီးနှိုင်းယှဉ်ဆောင်းပါးများကိုရေးသားသူများ, OS, browser များသို့မဟုတ်မည်သည့် application ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအနည်းငယ်သာနှင့်အရသာရှိသည်ထင်, ထို့ကြောင့်ရလဒ်ဆားတစ် ဦး နှင့်အတူယူသင့်ပါတယ်, စံပြသည်အထိစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါသည် တစ်ခုချင်းစီအတွက်အသုံးအကျဆုံးဆုံးသောအရာကိုရှာဖွေပါ။
ဒီ site ကို MuyLinux အသစ်တစ်ခုမပြုလုပ်ပါနှင့်
အမှန်မှာ၊ ဤဆောင်းပါးသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အယ်ဒီတာတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမလုပ်နိုင်၊ လေးစားမှသာလျှင်။ အခုငါထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိလို့ငါပေးမယ်။ Opera သည်အချက် (၃) ခု မှလွဲ၍ အလွန်ကောင်းမွန်သော browser တစ်ခုဖြစ်သည်။
- အလွန်မြင့်မားသော RAM ကိုသုံးစွဲသည်။
- ၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ ၁၀၀% ကိုကောင်းစွာမပြနိုင်ပါ။
သင့်ရဲ့အကြွေးကိုဘယ်သူမှမယူသွားနိုင်ဘူး။ Opera သည်ယနေ့ခေတ်လူကြိုက်အများဆုံး browser အများစုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များစွာကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်ပိတ်ထားခြင်းကြောင့်အတိအကျဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်၎င်းသည် Firefox သို့မဟုတ် Chrome ထက်သာလွန်သည်ဟုဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အကျွံပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်ထပ်ခါတလဲလဲပြောသော်လည်း pandev92 ၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်မှန်ကန်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်နှစ်ချက်၏နောက်ကျောကိုပင်မရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည် အထက်။
Elav man, ငါ့ chrome ကငါ့ကိုအများကြီးစားတယ်၊ browser နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုငါစကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ megabytes 500 ထက်ပိုပြီးသုံးမယ်။ ငါအဲ့ဒီ့ကိုလည်ပတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုဖုံးကွယ်လိမ့်မယ်၊
Firefox သည်ကျွန်ုပ်ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ၄ နာရီမှ ၅ နာရီကျော်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀ နာရီကျော်လျှင်၊ နှေးကွေးလာပြီး၊ cookies များကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စာမျက်နှာများကိုအဆင်မပြေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တံခါးပိတ်အရင်းအမြစ်ကငါ့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်။ နိုင်ငံရေးအတွက်ငါတကယ်ဘဝမှာဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ ငါ Linux ကိုအတွေးအခေါ်အတွက်အသုံးမပြုဘူး။ ငါ့အမြင်ကတော့အဲဒါဟာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးလည်ပတ်ရေးစနစ်ပဲ။ ဒါကြောင့်တချို့သေးငယ်တဲ့သူကျရှုံးရှိပါတယ်အခါ။
Firefox အပြည့်အစုံ? xDDD
Opera တွင်တစ်ခုတည်းသောချွတ်ယွင်းချက်မှာ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲဖြစ်သည်၊ သင်နှင့်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာမျှော်လင့်သော်လည်း၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်သောကျော်လွှားနိုင်သောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုရသည့်အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာနည်းပညာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း browser (သို့) အခြား free application တစ်ခုကိုနည်းပညာထက်သာလွန်တဲ့စီးပွားဖြစ်တစ်ခုထက်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
PS: ဤနေရာတွင်မှတ်ချက်များတင်ရန် denriseup အီးမေးလ်အကောင့်များသည်အဘယ်ကြောင့်မသင့်လျော်သနည်း။
သင်ထိုအီးမေးလ်ဒိုမိန်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ မသုံးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်များနှင့်အလားတူအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုသငျသညျထငျရှားသောအမှား, ဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးသောသင်စဉ်းစားပါသောအခြားသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့နိုင်အောင်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်, ငါ့ကိုရေးပါ (kzkggaara[AT]မြဝတီ[အမှတ်]com) ။
ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောပြသနာမှာ gnome developer များ၏အတွေးအခေါ်ကိုကျွန်ုပ်သိရှိပြီးကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာရှိ gtk အရာအားလုံးကိုတားမြစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်သင့်သည်မှာအခြား desktop များရှိ application များ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တခြားသူတွေကသူတို့လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
Clabsol အသိုင်းအဝိုင်းကိုနှုတ်ဆက် !!
ကျွန်တော့်နာမည်က Manuel Escudero ဖြစ်ပြီးကျွန်တော် Xenode Systems Blog အတွက်ရေးတယ်။ ကျွန်ုပ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုပြောချင်ပါတယ် -
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့တွင် Humble Indie Bundle4အတွက်ဂိမ်း ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည့် GiftCode နှင့်သူတို့၏သီချင်းများသည်ဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ -
သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်
ငါအပေါ်မှာထားခဲ့သမျှ link ကို link တစ်ခုချခြင်းသို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြတာအကောင်းဆုံးပါပဲ
ထင်ရတာ ဤအချက်သည်ပါ ၀ င်မှုပိုမိုများပြားလာပြီးပိုမိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိရန်ဖြစ်သည်
ဆိုရှယ်မီဒီယာ, သူတို့တတျနိုငျသလျှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Linux အသုံးပြုသူ # 509052
တွစ်တာ - @Jmlevick
Blogger: Xenode ဘလော့ဂ်
Xenode Systems - xenodesystems.com - «သင်၏ကမ္ဘာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
Chromium နှင့် Opera အကောင်းဆုံး browser (ဘရောက်ဆာ) များတွင်
မည်သည့်ဘရောင်ဇာတွင်မှအရာအားလုံးမရှိပါ။ သို့သော်အခြားသူများထက်ပိုမိုသောအရာများရှိသည် (သင်တန်း၏တိုးချဲ့မှုများမရေတွက်ပါ) နှင့်ဤကွဲပြားခြားနားမှုများ၌တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပြည့်စုံသောဘရောင်ဇာများအကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါဘာတွေသိထားသလဲ…စားသုံးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ပုဂ္ဂလဒိmedium္ medium medium ဖြစ်လိမ့်မယ်…။ ငါ့ကိစ္စမှာတော့ RAM Chromium / Chrome / Iron for Firefox or Opera ထက်အများကြီးစားသုံးတယ်။
Firefox (သို့) Chrome တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စာမျက်နှာများ၏ပုံရိပ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလွန်းသောကြောင့် Opera ကိုမကြိုက်ပါ။ ဒီ browser နဲ့ Wi8ndows နဲ့ Mac တို့မှာလည်းအလားတူပဲ၊ G + အတွက်လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မပြောသင့်ဘူး။
အော်ပရာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါလေးစားတယ်၊ သူနဲ့သူအသုံးပြုတဲ့သူကိုငါလှည့်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းကိုမသုံးဘဲအလုံအလောက်ရှိပြီး အကယ်၍ သူကြိုက်နှစ်သက်ပါကအယ်ဒီတာအတွက်၎င်းကိုကောင်းစွာပြောဆိုရန်တရားဝင်သည်။
ငါမကြိုက်တာကမင်းရဲ့ပထမဆုံးစာပိုဒ်သုံးပိုဒ်ကိုဖတ်ရုံသာမက xDD ကိုမင်းလှည့်မကြည့်ဘူး
ArchLinux ကို Acer Aspire One၊ Xfce နှင့် Opera တို့ကိုအဓိက browser အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို Chrome ကိုအသုံးပြုသော Linuxers အများစု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ငြင်းပယ်ခြင်းအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေခြုံဟန်ရှိသည်။
Chromium သည်ပွင့်လင်းသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသော်လည်းဂူဂဲလ်သို့အချက်အလက်အမြောက်အများပေးပို့သည်၊ အကယ်၍ အမှန်တကယ်ပွင့်လင်းသော browser ကိုအသုံးပြုလိုပါက SRWare Iron ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
Opera သည်ပွင့်လင်းသောနည်းပညာများကိုသုံးသည်၊ ဝက်ဘ်နှင့်ဝက်ဘ်ကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည် HTML5 အားပွင့်လင်းသောဝဘ်တစ်ခုအတွက်အဆိုပြုရာတွင်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 64bits အတွက် Linux အတွက်မူရင်းအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် tab မှကွဲလွဲသောဖြစ်စဉ်များကိုမဖန်တီးနိုင်။ ငါ့ကို ... Internet Explorer 6, ပြတင်းပေါက်နည်းပါးလာသာ) ။
အမှန်တရားမှာ opera သည်ကျွန်ုပ်အားတည်ငြိမ်မှု၊ မြန်နှုန်းကိုပေးသောတစ်ခုတည်းသော browser ဖြစ်သည်။ (milliseconds ၏စိတ်ပျက်ဖွယ်ဆွေးနွေးမှုများကိုမပြုလုပ်ပဲအခြားသူများထက်သာလွန်ပြီးလူသားတို့သိသာမြင်သာမှုမရှိနိုင်သော), ပြည့်စုံသောမေးလ်စနစ်၊ RSS reader, bittorrent, manager အပြည့်အ ၀ download လုပ်ခြင်းသည် web စံနှုန်းများကိုအလွန်တင်းကျပ်စွာလေးစားသည် (G + သည်အလုပ်မလုပ်ပါကအထက်တန်းလွှာသို့မဟုတ်ပိတ်ထားသောဝဘ်ဆိုက်ဟုခံစားရပါက)၊ မန်နေဂျာ၊ အော်ပရာလင့်ခ် (ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်း၊ ကျွန်ုပ်၏ desktop pc၊ my mac ကိုထပ်တူပြုပါ) နှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့) ၎င်းသည်စည်းလုံးမှု (ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာများကိုဝက်ဘ်ဆာဗာများစွာသို့ပြောင်းလဲခြင်း) လည်ပတ်သည်။ အကယ်၍ KDE ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်၎င်းနှင့်ကိုက်ညီမည်။ ကျွန်ုပ် GTK2 (Xfce) ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းနှင့်ကိုက်ညီမည်။ ငါ GTK3 (Gnome) ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းနှင့်လည်းကိုက်ညီလိမ့်မည်။ Opera turbo (ကျွန်ုပ် Firefox နှင့် chrome / ium ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ဒေတာအစီအစဉ်ရှိသည့်တိုင်စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း) ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် 3G, Edge နှင့် GPRS ကွန်ယက်များတွင် ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
Opera ကို browser (ဘရောက်ဆာ) များကြားတွင်“ သူ၏ဘုရင်မင်းမြတ်” ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောအခါ၎င်းသည်၎င်းရာထူးကိုရရှိထားပြီး၊ မည်သည့် operating system ကိုမှမဖယ်ထုတ်ဘဲ၊ မြန်ဆန်သောလမ်းညွှန်နှင့်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်သွင်ပြင်များဖြင့် browser ကိုမွမ်းမံရုံသာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့၏နေရာ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်ထားလျှင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေသည်၊ သို့သော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်စံနှုန်းတစ်ခုကိုသင်ထုတ်ပေးနေကြောင်းသတိရပါ။ Opera ၌သင်ပြောသမျှအားလုံးရှိသည်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်သင်ပြောသည့်အရာသည်လုံးဝမမှန်ပါ ၀ က်ဘ်စံနှုန်းများကိုအထူးတင်းကျပ်စွာလေးစားခြင်း။ ၎င်းသည် G + မျှသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် WordPress.com နှင့် Midori ကဲ့သို့သော browser များကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေသည့်အခြားသောဆိုဒ်များမှာ Opera မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ထိုအခါဤအကြိမ်ငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအကြောင်းပြောနေတာနေပါတယ်။ Opera သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုနေရာမှ "မင်းမင်းမင်း" ဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်ထိုသို့မထင်ပါ။ သူ၌တိုက်ပွဲများစွာဆင်နွှဲရပြီးဘာသာရပ်အမြောက်အများကိုမိမိနိုင်ငံသို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ wordpress opea သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်မည်သို့ဤနေရာတွင်ရေးသားရမည်ကိုမသိပါ။ P, g + တွင်သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ google သို့မေးမြန်းရပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Opera ... version ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်သည်
ကောင်းပြီ၊ စိတ်ဝင်စားစရာမှာသင်သည် Chrome နှင့် Opera တို့တွင် WordPress ရှိပုံများကိုအရွယ်အစား ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ယခု Myopera သည် Opera နှင့် Firefox တို့နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည် .. ကောင်းပြီ .. အရူး။
Elav, သင်Andrésသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ၍ စံသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ပေးနေသည်ဟုသင်ပြောပြီးသင်လည်းလုပ်နေသည်။ သင်ဤသို့မဟုတ်ထို site သည်သင့်ကို Opera နှင့်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုသင်မသိလျှင်၊ ဒါကြောင့် browser ကိုအမှားဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာရှင်းပြခြင်းမပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ဘရောင်ဇာတစ်ခုကစံနှုန်းများကိုလိုက်နာသည်ဆိုသောကြောင့်၎င်းသည်ဆိုဒ်ကိုကောင်းစွာမပြသောကြောင့်ယုတ္တိမတန်သော၎င်းသည်မည်သည့် IE ကိုမဆိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြလိမ့်မည်။
စိတ်မကောင်းပါဘူးငါ browser တစ်ခုကြောင်းငြင်းခုန်ရန် "ဆိုလို အဘယ်သူမျှမ ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆိုဒ်ကိုကောင်းစွာပြသနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲမှုသည်မီး၊ ခရမ် / ium တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါက browser (ဘရောက်ဆာ) အကြားမှာအများဆုံးလိုလားသူပါ။
ငါမှတ်ပုံတင်ကို webkit သို့ပြောင်းလိုက်ပြီးပြproblemsနာများလည်းမရှိတော့ပါ။ developer များသည်အော်ပရာနာမည်ကိုထည့်မစဉ်းစားပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်မကိုက်ညီသောဆိုင်းဘုတ်ကိုရရှိပါသည်။ /
ပုံမှန်ဆွေးနွေးခြင်းသည်၎င်းသည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုကောင်းခြင်းရှိမရှိ၊ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်အသုံးအများဆုံးဘရောင်ဇာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေကိုဤနေရာတွင်ထည့်သွင်းခြင်းက ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားအရာအားလုံးသည်အမြဲတမ်းတူညီသောဆွေးနွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်မတူကွဲပြားသော distros များကဲ့သို့သောသင်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့်ဘယ်သောအခါမှဘယ်သောအခါမျှမရောက်ရှိနိုင်ပါ။
ငါဆိုအခြားရွေးချယ်စရာနီးပါးကောင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်အခြားသုံးပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသာ, လိုအပ်ချက်များကို, အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းများမှဘာသာပြန်ထားသော ... ကောင်းသောကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ် ... ငါ့အဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကောင်းဆုံး firefox ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါအဘို့, ပြန်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဤ browser သည်ကျွန်ုပ်သုံးသော extensions များကိုပေးသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအခြားတစ်ခုမှမပေးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် Firefox ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကတခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကငါ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။
ဘလော့ဂ်များတွင်ရေးသားသောသင်ဤစာစောင်များသည်အသစ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာဘာမှမပါ ၀ င်သည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ သင့်ရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ် (သို့)“ အကောင်းဆုံး” စသည့်အသုံးအနှုန်းများကိုထုတ်ဝေသည့်အခါ ပို၍ တင်းကျပ်သင့်သည်။ ထိုသို့အတူတူဖတ်ရှုဖို့ပင်ပန်းသည်။
သူကဒီကနေမဟုတ်ရင်တောင်မှ Raspberry Higher Self ကလုပ်နိုင်ပါတယ်
Hahaha သည်ထိုလူကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးသူသည်အားလပ်ရက် XD တွင်သူနှင့်အတူရှိရမည်
ဒါက spam xD ဖြစ်သင့်လား။
သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ jutsu = အို
သင်၏ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရိုးသားစွာသဘောတူသည်။ Opera သည်အကောင်းဆုံးသော browser (သေချာသည်မှာလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ စံနှုန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်) ဖြစ်သည်။ အရမ်းခက်တယ် !! "ချိုမြ" သည်ဟုကျွန်ုပ်ငြင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်သည် Free System ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသည်ဆိုသောမှတ်တမ်းအတွက် (ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုမှရံဖန်ရံခါမှအပ) ကြိုးစားကြည့်ပါ တစ်ခုခု: P) ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ (နှင့်မမှန်ပါဘူး) စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဟာ (နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ) ချို့ယွင်းချက်ကြောင်းနှင့်အခမဲ့အရာထက်အလိုအလျောက်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည် (အရည်အသွေးအတွက်) နှင့်ထိုသဘောမျိုးအတွက်လက်ခံရရှိသောဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်မှုများမ (နှင့်မမှန်ပါဘူး) ငါမယုံ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အခမဲ့စနစ်များကိုမသုံးသောသူများထံမှဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသောကြောင့်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အခြားသူများနှင့်သာတွေ့ရလေ့ရှိသည့်အတွက်သူတို့အသုံးပြုသောလူများကိုဆိုလိုသည်။
စားသုံးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုသဘောမတူနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဤအတွေးသည်ပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းအံ့အားသင့်မိသည်။ သာမန်လူများကဟာ့ဒ်ဝဲကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ကောင်းစွာအသုံးပြုရန်သတိမထားမိပုံရသည်။ လျှောက်လွှာတစ်ခုသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကမ်းလှမ်းရန်စားသုံးရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်မှန်ကန်ကန်စားသုံးနေလျှင်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အခြားသုံးစွဲမှုလျော့နည်းပြီးတွားသွားလျှင်၎င်းသည်စားသုံးခြင်းအတွက်အဆင်မပြေပါ။ ဆန့်ကျင်။ အားနည်းစွာပုံစံပြုထားသည် (သာမန်လူများနှင့်ပညာရှင်များ၏စမ်းသပ်မှုများကြောင့် "စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း" ကိုပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သတိပြုပါ)
ဒါတွေအားလုံးပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် bug တွေကိုသတင်းပို့နိုင်တယ်၊ ဘယ်မှာလဲ။
ဟုတ်တယ်၊ bug တွေကိုဒီမှာအလွယ်တကူအစီရင်ခံနိုင်တယ်။ http://www.opera.com/support/bugs/
ငါသဘောတူသည်မှာ ... ၎င်းကိုပိတ်လိုက်သည်၊ ၎င်းကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနိမ့်ကျစေသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့အပြင် Opera Desktop Team Blog မှသတင်းအချက်အလက်နှင့်အမှားအယွင်းများကိုတက်ကြွစွာဖြင့်အမြဲတမ်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်၊ အနည်းဆုံးတော့သူတို့အော်ပရာများတွင် အသုံးပြုသူ၏စကားကိုနားထောင်ပါ (ကျွန်ုပ်သိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် desktop အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် bug များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည်)
နည်းပညာပိုင်းအရညံ့ဖျင်းသောပိတ်ထားသောထုတ်ကုန်များရှိသော်လည်း Opera တွင်မူထိုသို့မဟုတ်ချေ
Galaxy S နှင့် Galaxy Tab အတွက် Android4မရှိတော့ပါ
KahelOS Post- တပ်ဆင်ခြင်း